Jack Hayhow zitere m akwụkwọ ya, Amamihe nke Ezi-efe efe. Echere m na nke a bụ 'onyinye' mbụ m nyere dịka blogger! Enwere m akwụkwọ ole na ole na abalị m ugbu a iji mechaa - mana m na-atụ anya igwu ala na nke a. Ọ bụ ihe dị mma iji nweta akwụkwọ aka Jack dere yana akwụkwọ ahụ. Na Jack wepụtara oge dee m wee zipụ akwụkwọ ahụ pụtara ọtụtụ ugbua!
CVS Acylọ ahịa ọgwụ zitere m kaadị maka ezumike na-ekele m maka nkwado m. Ejiri onye ọrụ ọ bụla bịanye aka n'onwe ya! CVS m mara mma. Ọ na-echetara m ọtụtụ ụlọ ahịa akuku anyị na-eleta na-etolite na boonies na Newtown Connecticut (A na-akpọ ụlọ ahịa ahụ Crossroads… ha na-ahapụ ụmụaka ka ha bulie biya ma soro nne na nna anyị jiri ekwentị kpọọ ya. … Nwoke abum agadi!). Ọ bụrụ na CVS nwere mkpụrụ osisi, enwere m ike agaghị aga ịzụ ahịa n'ụlọ ahịa ma ọlị! CVS gosipụtara na ị nwere ike ịbụ nnukwu agbụ ma ka na-emeso ndị mmadụ dị ka onye agbata obi gị.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ n’oge a ka ndị mmadụ mara ihe aka ‘mmadụ’ pụtara. Jack gaara ezitere m akwụkwọ ya site na Amazon, CVS na Wikimedia nwekwara ike zitere m email na-ekele m. M a nnukwu akwagide nke email… M n'anya eziokwu na ọ nwere ike ahaziri ma akpaghị aka. Nke a were obere mbọ karịa ma ọ ga-efu ntakịrị ihe. Nke ahụ na-agwa m na ndị folks a chere na m dị mkpa maka azụmaahịa ha na ọ bara uru itinye ego na m. Nke ahụ bụ ozi siri ike, ọ́ bụghị ya?
Nke ahụ bụ ụdị akwụkwọ ozi na-arụ ọrụ. Puku mpempe akwụkwọ ozi ndị ọzọ m nwetara ebe a enweghị ọnụ ahịa. Agwara m ndị ahịa tupu oge ị ga - eji mee ka mmadụ lebara gị anya site na iji leta ozigbo bụ oge ọ ga - ewe ha iji si igbe igbe ozi ha gaa na mkpofu ahihia ha. Agbanwebeghị m echiche m na nke ahụ ma ọlị. Izipu ihe eji ede ederede ma ọ bụ kaadị ekele ị na-adọrọ uche m!